Fikambanan’ny “Magistrat” : “Tsy miombon-kevitra amin’io fitokonana io” -
AccueilRaharaham-pirenenaFikambanan’ny “Magistrat” : “Tsy miombon-kevitra amin’io fitokonana io”
10/06/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Na dia eo aza ny fankatoavan’ireo mpitsara sasany ny baiko izay omen’ny sendikà, dia nivoaka tamin’ny fahanginany kosa omaly ireo mpitsara tsy mankatoa ny fikomiana tanterahin’ ireo namany. Nambaran’ity fikambanana ity tamin’ny alalan’ny mpitondra teniny Rasamimamy Angelin fa iraisany ny tolona tanterahin’ny sendikà saingy nilaza kosa ity farany fa « tsy ilaina ny firosoana amin’ny fitokonana satria manelingelina ny raharam-pitsarana fitsarana izany”. Ho an’ny fikambanana rahateo dia « endrika tsara no tokony haseho hoy izy ireo mba hanome sary tsara ny tontolon’ny fitsarana” hoy ny fanazavana noentin’ity mpitondra teny ity .Ohatra izay noentin’izy ireo manoloana io fikorontanan’ny raharaham-pitsarana io ny hoe raha toa ka misy voafonja iray izay tokony hotsaraina nefa mihemotra ny fitsarana, dia lasa fandikan-dalàna izany satria lasa fitazonana tsy ara-dalàna na “détension arbitraire” izany. Noho ireo antony ireo izany dia samy mizaka ny vokany avokoa izany na olon-tsotra na ihany koa ireo voafonja , izay efa tokony hizaka ny zony izany hoe ny fanitsakitsahana ny zon’olombelona .
Raha ny zava-nitranga omaly sy afak’omaly mantsy dia maro ireo mpila raharaha no niveri- maina, nefa dia taratasy hiankinana zavatra maro no atao eny amin’ny fitsarana. Raha ny fanazavana izay nomen’ny olona nila raharaha omaly sy afak’omaly ireo dia ny hoe «tokony nisy ny fampilazana mialoha, fa tsy rehefa tonga ety izahay vao hoe mikatona ny fitsarana , tsy misy fijerena ny vahoaka madinika mihitsy izay sady efa lany fotoana no lany saran-dalana ». Na dia teo aza moa ny menomenona nataon’ ireo izay tonga nila raharaha ireo, dia tsy nisy mihitsy valiny mahafa-po azon’ izy ireo. Ny tena nampalahelo aza dia ny fahitana ireo izay hanao fifaninanana hiditra eny amin’ny INFA sy hiditra ho polisim-pirenena haka bulletin nomerao 3, dia niveri- maina avokoa. Ny fara fanaterana ny antontan-taratasy ahafahana mifaninana anefa ho an’ny INFA dia tapitra ny faha 10n’ ny volana jona ho avy izao.
Ankilany ny ministry ny fitsarana Charles Andriamiseza dia nilaza omaly fa efa misy ny fifanatonana sy fifampiresahana ahafahana mamaha ny olana misy. Ny fitondram-panjakana rahateo, hoy izy, dia vonona amin’ izany. Tsapa rahateo ny fahavononan’ny fitondram-panjakana hijery mivantana ny vahaolana manoloana ny zava- misy, satria dia nambaran’ny minisitra tompon’andraikitra rahateo fa “tsy misy izany tsindry atao izany, satria dia ny sasany, hoy izy, no manao ny hadalana saingy ny rehetra no voatondro molotra manoloana izany”. Andrasana rahateo izany ny fifampiresahana eo amin’ny roa tonta, izay fantatra fa tsy ho ela .
Ny faha-24 septambra, izany hoe, dimy taona androany no nanombohan’ny fampielezan-kevitra tamin’ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2013. Tsy ny famotsiam-bola maloto na trafika-na « bois de rose », na fanodinkodinam-bolam-panjakana irery ihany no mampalaza an’i ...Tohiny